I-Robaxin vs.Soma: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe - Izidakamizwa Vs. Umngani | Julayi 2021
Izindaba Izilwane Ezifuywayo Imininingwane Yezidakamizwa, Izindaba Imfundo Yezempilo Imfundo Yezempilo, Izilwane Ezifuywayo Inkampani, Ulwazi Lwezidakamizwa Ukuphuma Umphakathi, Ukuphila Kahle Ukuphila Kahle Umphakathi, Inkampani Inkampani, Imfundo Yezempilo Inkampani, The Checkout Imfundo Yezempilo, Izindaba Imfundo Yezempilo, Ukuphila Kahle Imininingwane Yezidakamizwa
Main >> Izidakamizwa Vs. Umngani >> I-Robaxin vs.Soma: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe
I-Robaxin vs.Soma: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe
Wake wakhipha umgogodla wakho noma waba nobuhlungu obuhlungu emuva noma ama-spasms? Noma wake waphenduka ngendlela engafanele, okwaholela ebuhlungu obukhulu bentamo? Uma uke wahlangabezana nanoma iyiphi yalezi zinkinga, umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo kungenzeka ukuthi unqume isidambisi semisipha. I-Robaxin ne-Soma yimithi emibili kadokotela ekhonjiswe ekwelapheni imisipha. Zombili lezi zidakamizwa zivunyelwe yi-United States Food and Drug Administration (FDA).
I-Robaxin neSoma bahlukaniswa eqenjini lemithi ebizwa ngokuthi ama-skeletal muscle relaxant . I-Robaxin neSoma kucatshangwa ukuthi isebenza ngokususelwa ekucindezelekeni okujwayelekile kwe-CNS (uhlelo oluphakathi lwezinzwa) nezindawo zokudambisa umzimba. Futhi, iSoma ihlanganiswe ne-meprobamate, okukholelwa ukuthi iqeda ukukhathazeka futhi idale ukuthamba. Kodwa-ke, akwaziwa ukuthi i-meprobamate isiza kangakanani ukukhulula ukuqhuma kwemisipha.
Ngoba iSoma ingadala ukuhlukunyezwa noma ukuncika, ihlukaniswa njenge- Isheduli IV into elawulwayo . Yize iRobaxin neSoma bobabili bephumuza izicubu zomzimba, abafani. Funda ukuze ufunde kabanzi ngeRobaxin neSoma.
Uyini umehluko omkhulu phakathi kweRobaxin neSoma?
I-Robaxin (methocarbamol) ne-Soma (carisoprodol) ziyizidambisi zemisipha ethambile. I-Robaxin itholakala kwifomu le-tablet kanye ne-injection. ISoma iyatholakala ngefomu yethebhulethi. Yomibili le mithi ingasetshenziswa kubantu abadala. I-Soma kufanele isetshenziselwe izinkathi ezimfushane kuphela, isikhathi esingaphezu kwamasonto amabili kuya kwamathathu.
ukuthi yikuphi ukuphuza izinhlungu engingakuthatha nge-zoloft
Umehluko omkhulu phakathi kweRobaxin neSoma
Isigaba sezidakamizwa I-skeletal muscle relaxant I-skeletal muscle relaxant
Isimo somkhiqizo / ejwayelekile Okuvamile; IRobaxin 750 ingatholakala ngomkhiqizo Umkhiqizo nokujwayelekile
Ngubani igama elijwayelekile? I-Methocarbamol I-Carisoprodol
Izidakamizwa zingena ngaziphi izinhlobo? Amathebulethi, umjovo Amathebulethi
Uyini umthamo ojwayelekile? Isilinganiso sokuqala: Amaphilisi angu-3 500 mg athathwe izikhathi ezine nsuku zonke NOMA amaphilisi ayizi-2 750 mg athathwe izikhathi ezine ngosuku
Isilinganiso sesondlo: amaphilisi ayizi-2 500 mg athathwe izikhathi ezi-4 nsuku zonke noma amaphilisi ayizi-2 750 mg athathwe izikhathi ezi-3 nsuku zonke Ama-250 mg noma ama-350 mg amahlandla ama-3 nsuku zonke nangesikhathi sokulala kuze kube amasonto amabili kuya kwamathathu
Yelashwa isikhathi esingakanani? Isikhathi esifushane Isikhathi esifushane
Ubani ovame ukusebenzisa umuthi? Abantu abadala Abantu abadala baneminyaka engu-16 kuya kwengama-65
Izimo ezilashwa yiRobaxin neSoma
I-Robaxin (Yini i-Robaxin?) Ne-Soma (Yini i-Soma?) Kukhonjisiwe ukukhulula ukungaphatheki kahle okuhambisana nezimo ezibuhlungu, ezibuhlungu zemisipha.
Kuyaziwa kuRobaxin echaza imininingwane yokuthi iRobaxin kufanele isetshenziswe kanye nokuphumula, ukwelashwa ngokomzimba, nezinye izindlela.
Imininingwane ebhalwe yiSoma ithi umuthi kufanele usetshenziselwe kuphela amasonto amabili noma amathathu.
Isimo I-Robaxin Soma
Yehlisa ukungakhululeki ezimweni ezinzima, ezibuhlungu zemisipha Yebo Yebo
Ngabe iRobaxin noma iSoma isebenza kangcono?
Ayikho idatha eminingi yakamuva eqhathanisa ukuphumula kwemisipha ukuze kusebenze. A Ukubuyekezwa kuka-2004 yezifundo zathi kunobufakazi obufanele bokuthi iSoma (carisoprodol), phakathi kokunye, iyasebenza uma kuqhathaniswa ne-placebo yezinhlungu ezibuhlungu emuva noma entanyeni, nedatha elinganiselwe kakhulu noma engahambisani nokusebenza kweRobaxin (methocarbamol), phakathi kwabanye. Abaphenyi baphetha ngokuthi abukho ubufakazi obanele bokunquma ukusebenza noma ukuphepha okuhlobene kwanoma iyiphi yale mithi.
Eqinisweni, lapho ubheka isimo esifana nobuhlungu beqolo, i-American Pain Society ne-American College of Physicians imihlahlandlela eshicilelwe Kunconywa iTylenol (acetaminophen) noma ama-NSAID (izidakamizwa ezingezona ukuvuvukala ezifana ne-Advil) njengokwelashwa kokuqala kweziguli eziningi. Le mithi ibekezelelwe kahle futhi inemiphumela emibi embalwa. Futhi, ezinye izindlela zingazama, njengoba kunconywe udokotela wakho, njenge-yoga, ukwelashwa ngokomzimba, ukubhucungwa, kanye / noma ukuphumula.
Ukubuyekezwa kowezi-2014 kuma-relaxation emisipha yamathambo kwasho ukuthi uma i-ejenti yomugqa wokuqala ingasebenzi, khona-ke a kungahle kuqaliswe ukuphumula kwemisipha . Ukuphumula kwemisipha kungasebenza ekwelapheni ukuphazamiseka kwemisipha kepha kungaba nemiphumela emibi ekhathazayo. Futhi, njengezinto ezilawulwayo, iSoma ihlotshaniswa nokuhlukunyezwa nokuncika. Ngenxa yalokhu okungenzeka kube khona ukuhlukunyezwa nokuncika, iziguli ezinenkinga yokusebenzisa izidakamizwa noma umlando wokuphazamiseka kokusebenzisa izidakamizwa zingenza kangcono ngeRobaxin, okungenzeki ukuthi ihlukunyezwe.
Yize ukuphumula kwemisipha kungasebenza (uma kuqhathaniswa ne-placebo) yokukhululeka kwesikhashana, kunengozi engama-50% yemiphumela emibi. Le miphumela emibi ifaka ikhanda, ukungaboni kahle, nokuncika okungenzeka. Ababhali bokutadisha babuye baphawule ukuthi azikho izifundo eziqhathanisa ukuphumula kwemisipha nezindlela zokwelapha zomugqa wokuqala njengeTylenol noma ama-NSAID. Ngakho-ke, uma kudingeka i-relaxer yemisipha, kufanele kubhekwe izici ngazinye, kufaka phakathi izimpawu, ukwelashwa okwedlule, imiphumela emibi engaba khona, nezinye izimo zezokwelapha. Futhi, zombili izidakamizwa ziku- Uhlu lwamabhiya yemithi engahle ingalungele abantu abadala abangaphezu kweminyaka engama-65. Ababekezelelwa kahle abantu abadala asebekhulile ngenxa yemiphumela yabo engemihle, ukuthomalalisa umzimba, kanye nengozi eyengeziwe yokuwa nokuqhekeka.
Umuthi osebenza kahle kakhulu unganqunywa ngumhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo, ongacabangela izimpawu zakho, izimo zezokwelapha, nomlando wezokwelapha, kanye nanoma yimiphi imithi oyiphuzayo engasebenzisana neRobaxin noma iSoma.
Ukuqhathaniswa kanye nezindleko zokuqhathaniswa kweRobaxin neSoma
I-Robaxin ne-Soma zimbozwe yimishwalense eminingi kanye nezinhlelo zemithi ye-Medicare ngendlela ejwayelekile.
Inani elikhishwa ephaketheni lomuthi ojwayelekile ojwayelekile weRobaxin (amaphilisi angama-60, 750 mg) cishe linga- $ 25. Ukusebenzisa ikhadi lamahhala le-SingleCare kungehlisa intengo ibe ngaphansi kwama- $ 15.
Inani elikhishwa ephaketheni lomuthi ojwayelekile weSoma (60, 350 mg amaphilisi) cishe lilinganiselwa ku- $ 36. Ngekhuphoni le-SingleCare, ungathenga i-generic Soma ngamanani aphansi njenge $ 14.
Xhumana nomhlinzeki wakho womshuwalense ngolwazi olungeziwe olumayelana ne-Robaxin noma iSoma.
Ngokuvamile embozwe umshwalense? Yebo (okujwayelekile) Yebo (okujwayelekile)
Imbozwe ngokwejwayelekile yi-Medicare Part D? Yebo (okujwayelekile) Yebo (okujwayelekile)
Ubuningi 60, 750 mg amaphilisi 60, 350 mg amaphilisi
I-Medicare copay ejwayelekile $ 0- $ 37 $ 0- $ 7
Izindleko ze-SingleCare $ 15 + $ 14 +
Imiphumela emibi ejwayelekile yeRobaxin vs.Soma
Imiphumela emibi yakho kokubili iRobaxin neSoma ifaka ukozela, isiyezi, nekhanda. Imininingwane ebekwa nguRobaxin ayibiki amaphesenti ezenzeko.
Eminye imiphumela emibi kaRobaxin ingabandakanya isicanucanu, ukuhlanza, ukungaboni kahle, ukusabela okweqile, ukudideka, ukuquleka nokungavumelani.
Eminye imiphumela engemihle yeSoma ingabandakanya ukushaywa ngamanzi, ukuthuthumela, ukudinwa, ukucasuka, isicanucanu, ukuhlanza nokuquleka.
Lolu akulona uhlu olugcwele lwemiphumela emibi. Okunye, imiphumela emibi kakhulu ingenzeka. Xhumana nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo ukuthola uhlu oluphelele lwemiphumela emibi.
Ukozela Yebo % akubikiwe Yebo 13-17%
Isiyezi Yebo % akubikiwe Yebo 7-8%
Ubuhlungu bekhanda Yebo % akubikiwe Yebo 3-5%
Umthombo: I-DailyMed (Robaxin) , I-DailyMed (Soma)
Ukusebenzisana kwezidakamizwa zeRobaxin vs.Soma
I-Robaxin noma iSoma akufanele ihlanganiswe notshwala. Imithi edala ukucindezelwa kwesistimu yezinzwa, njengama-opioid afana nePercocet, benzodiazepines afana neValium, kanye nezidambisi, kufanele kugwenywe uma kungenzeka uma uthatha iRobaxin noma iSoma. Imiphumela eyengeziwe ingenzeka, kokubili ngokudangala kwe-CNS (kubangela ukukhukhumala okujulile nokukhubazeka) nokudangala kokuphefumula (kubangele ukwehlisa kanye / noma ukuphefumula kanzima, futhi kungasongela impilo). Kodwa-ke, uma inhlanganisela yemithi yokusebenzisana ingenakugwenywa, imithamo ephansi kakhulu yomuthi ngamunye isikhathi esifushane kufanele isetshenziswe, futhi isiguli kufanele sibhekwe ngeso elibukhali.
Okunye ukuxhumana kwezidakamizwa kungenzeka. Xhumana nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo ukuthola uhlu oluphelele lokuhlangana kwezidakamizwa. Tshela udokotela wakho ngayo yonke imithi oyiphuzayo, kufaka phakathi incwadi kadokotela, i-over-the-counter, namavithamini.
Izidakamizwa Isigaba sezidakamizwa I-Robaxin Soma
Utshwala Utshwala Yebo Yebo
I-Phenobarbital Ama-barbiturates Yebo Yebo
I-Temazepam I-Benzodiazepines Yebo Yebo
Zolpidem Ama-hypnotics wokulalisa Yebo Yebo
I-Tramadol Ama-opioid Yebo Yebo
I-Diphenhydramine Ama-antihistamine Yebo Yebo
I-Venlafaxine Izidakamizwa ze-SNRI Yebo Yebo
Izexwayiso ngeRobaxin neSoma
Ngaphambi kokusebenzisa i-Robaxin noma i-Soma, tshela umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwezempilo nganoma yiziphi izimo zezokwelapha (njengezinkinga zesibindi noma zezinso) onayo nayo yonke imithi oyiphuzayo.
Ungahlanganisi iRobaxin noma iSoma notshwala noma imishanguzo edala ukudangala kwe-CNS (bona imininingwane eyengeziwe esigabeni sokusebenzisana kwezidakamizwa ngaphezulu).
IRobaxin noma iSoma ingadala ukozela noma isiyezi, okungaphazamisa ikhono lakho lokushayela noma lokusebenzisa imishini. Ungashayeli noma usebenzise imishini uze uqiniseke ukuthi iRobaxin noma iSoma ayikuthinti ukuphaphama kwakho nesikhathi sokuphendula.
Ungasebenzisi i-Robaxin noma i-Soma uma une-aleji kunoma iyiphi ingxenye. Ungayisebenzisi iSoma uma uxabana ne-meprobamate.
Gcina lapho izingane nabanye bengenakufinyelela khona.
Ezinye izixwayiso zeSoma:
Ungasebenzisi iSoma uma unomlando we-porphyria ngezikhathi ezithile.
ISoma kufanele isetshenziswe kuphela kubantu abadala abaneminyaka engu-16 kuya kwengama-65 ubudala.
Njengento elawulwayo, iSoma ihlotshaniswa nokuhlukumeza, ukuthembela, ukuhoxa, ukusebenzisa kabi, kanye nokuphambukisa ubugebengu. Ukuhlukunyezwa kweSoma kungaholela ekweqeni ngokweqile, okungadala umfutho wegazi ophansi, ukuquleka, i-CNS nokudangala ngokuphefumula, nokufa. Umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo uzohlola ubungozi bokuhlukunyezwa ngaphambi kokuyalela i-Soma futhi anciphise ubude bokwelashwa buze bube amasonto amabili kuya kwamathathu.
Kwezinye izimo, iziguli ezithathe iSoma zaquleka. Amacala amaningi ayehlobene nokudlula ngokweqile kwezidakamizwa eziningi.
Ukumisa isigubhukane iSoma kungadala izimpawu zokuhoxa, kufaka phakathi ukuqwasha, ukuhlanza, ikhanda elibuhlungu, ukundindizela, ukudikiza, ukubona izinto ezingekho, kanye ne-psychosis. Cela umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo ngezeluleko zendlela engcono yokuqeda iSoma.
Gcina lapho izingane nabanye bengenakufinyelela khona, ngaphansi kokukhiya nokhiye uma kungenzeka. Buza usokhemisi wakho ukuthi ungakulahla kanjani noma imuphi umuthi osele.
Ukweqisa ngokweqile kweSoma kungaholela ekucindezelekeni kwe-CNS. Ukweqisa ngokweqile kweSoma kuholele ekufeni, ekuqulekeni, ekucindezelekeni ngokuphefumula, koxinzelelo lwegazi oluphansi, ekuqulekeni, ekuboneni imibono engemihle, ekuboneni ukufiphala, euphoria, incoordination, ikhanda elibuhlungu, ne-delirium.
Kubikwe ukweqisa ngokweqile kweSoma. Lokhu kudlula ngokweqile kube ngengozi futhi akubanga ngengozi futhi kwenzeke yedwa noma kuhlangene nokudangala kwe-CNS, noma kusikali esinconyiwe.
Imibuzo ebuzwa njalo ngeRobaxin vs. Soma
I-Robaxin iyi-relaxant yemisipha esetshenziselwa ukwelapha ukuphazamiseka kwemisipha. Iqukethe isithako methocarbamol.
I-Soma nayo isetshenziselwa ukwelapha ukuqaqamba kwemisipha. I-relaxer yemisipha futhi iqukethe i-carisoprodol.
Ngabe iRobaxin neSoma ziyefana?
Cha. Yomibili le mithi yaziwa njengezixegisi zemisipha, kodwa inokuhlukahluka okuningi, njengoba kuchaziwe ngenhla. Isibonelo, banezithako ezahlukahlukene, imithamo, kanye nezigaba zezinto ezilawulwayo.
Ngabe iRobaxin noma iSoma ingcono?
Umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo anganquma ukuthi iRobaxin noma iSoma ikulungele kakhulu yini wena, ucabangela izimpawu zakho nezimo zezokwelapha, kanye neminye imithi oyiphuzayo engasebenzisana neRobaxin noma iSoma. Udokotela wakho futhi uzohlola ubungozi bakho bokuhlukunyezwa noma ukuncika uma ubheka iSoma.
uzipho ukwelashwa ukhunta uviniga ne-hydrogen peroxide
Ngingayisebenzisa iRobaxin noma iSoma ngenkathi ngikhulelwe?
I-Robaxin ingadala ukungajwayelekile kombungu futhi akufanele isetshenziswe ngesikhathi sokukhulelwa. ISoma ayinayo idatha eyanele iyasetshenziswa ekukhulelweni futhi ngokuvamile ayisetshenziswa ngesikhathi sokukhulelwa. Xhumana nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwezempilo ukuze uthole isiqondiso mayelana nokukhulelwa noma ukuncelisa.
Ngingayisebenzisa iRobaxin noma iSoma ngotshwala?
Cha. Gwema utshwala uma uthatha iRobaxin noma iSoma. Utshwala bungadala imiphumela eyengeziwe nge-Robaxin noma i-Soma futhi bungadala ukucindezelwa nokukhubazeka kwe-CNS, nokudangala kokuphefumula ngokuphefumula okuhamba kancane noma okunzima, futhi kungadala nokudlula ngokweqile okubulalayo.
Yisiphi isidudla semisipha esifana neSoma?
I-Carisoprodol ifana no-Soma-Soma ne-carisoprodol ziyefana. Amanye ama-relaxer emisipha ngaphandle kweRobaxin neSoma okungenzeka ukuthi uke wezwa ngokufaka Flexeril (cyclobenzaprine), Skelaxin (metaxalone), neZanaflex (tizanidine).
Ngabe iRobaxin isidakamizwa esingaphezulu kwamanani?
Cha. I-Robaxin itholakala kuphela ngemithi kadokotela. Izithambisi zemisipha azitholakali ngaphezu kwe-counter (OTC). Ama-analgesics athile (aqeda izinhlungu) afana neTylenol (acetaminophen) noma i-Advil (ibuprofen) ayatholakala nge-OTC. Buza umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwezempilo uma kufanele uzame umuthi we-OTC ngaphambi kokuzama ukuphumula kwemisipha.
Ingabe iRobaxin ingumbulali wezinhlungu?
I-Robaxin ihlukaniswa njenge-relaxant yemisipha. Kungasiza ngobuhlungu ngenxa yokuqaqamba kwemisipha. Akuhlukaniswa njengokubulala izinhlungu, kepha kuyabudambisa ubuhlungu nokuqaqamba.
Ayini amaketoni, futhi kungani eyingozi?
ungasusa kanjani ukhunta ngezinyawo
liyini izinga likashukela elihle egazini
Ngingathatha i-celebrex ne-ibuprofen ndawonye
bangaki abantu abanesifo sikashukela kithi
ungathola i-800 mg ibuprofen phezu kwekhawunta